OZ House | Product Detail
Color / Flavour :
Bar Code: -
(Suitable For Fine & Limp Hair )
☘️Volumising Conditioner - Rice protein, Pineapple, Mango, Papaya extract တွေနဲ့ပေါင်းထုတ်ထားလို့ light weight ဖြစ်ပြီး ဦးရေပြားသန့်စင်ပေးပြီး အာဟာရပြည့်စေတယ်၊ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာပြီး ဆံသားဝိတ်ရှိစေတယ်၊ ထူပြီးအိထွေးစေတယ် ( Suitable For Fine & Limp Hair )
In 2007, Sukin was launched in Melbourne, Australia, after identifyingagap in the market for high efficacy, environmentally sustainable and affordable natural skincare.
Sukin are passionate about providing “skincare that doesn’t cost the earth”. This tag line promotes Sukin’s stance on affordable pricing as well as referring to the natural and earth friendly ethos that we stand by. All of the products produced by Sukin are Australian made with ingredients that are naturally derived, cruelty free and vegan. All formulations are 100% Carbon Neutral, biodegradable and grey water safe.
Sukin have rapidly grown to become Australia’s number one natural skincare brand* due to the high efficacy, reliability and availability of our products. Withaportfolio of lines that are continually extending across face, body and hair, our brand can be enjoyed by men, women and children.
Sukin Hydrating Mist Toner သဘာဝအစိုဓာတ်ထိန်း toner
နွေရာသီတွင် ခြောက်သွေ့တတ်သော အသားရေကို စိုပြေကာ ကြည်လင် အေးမြမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ သဘာ၀ နှင်းဆီနံ့ဖြင့် အသားရေ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးသည် ။
သင့်အသားရေ သဘာဝအတိုင်း ကျန်းမာလှပစေရန် Sukin ၏ Night Creamက ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ အေးမြသော ခံစားမှုဖြင့် အရေးကြောင်းများ လျော့နည်းစေကာ နေ့စဉ် ဝင်းပသော အသားရေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Sukin Sensitive Calming Night Cream
Evening Primrose Oil နှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအကူအညီဖြင့် အသားရေကို သဘာဝအတိုင်း ကျန်းမာလှပစေရန် Sensitive Skin အတွက် Sukin ရဲ့ Night Cream ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ ရက်ထဲနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တိုက်ခိုက်ပြီး လှပနုပျိုဖို့ ဗီတာမင်ကြွယ်ဝတဲ့ Cocoa butter နှင့် Pure Ribose များ ပေါင်းစပ် Cream
Visitors : 508607
Contact Email - australianmade01@gmail.com
Retail Ph - 09785250199, 09977186569, 09977186570, 09740856648, 09780080555
Wholesale Ph - 09780080666, 09760806665, 09760164027
Thomasina street Bentliegh East Melbourne VIC 3165.
Copyright © 2017 OZ House. All Right Reserved | Powered by IGS
09780080666 / 09780080555
Call 1 Call2Cancel
We Prefer "Trusty" Pay
OZ House Trusty Account :
New user can download Trusty App